Casaankii Ugu Dhaqsiyaha Badnaa Taariikhda Kubbadda-cagta Iyo Sidda Layaabka Leh Ee Lagu Bixiyay – Garsoore Sports
Casaankii Ugu Dhaqsiyaha…
Casaankii Ugu Dhaqsiyaha Badnaa Taariikhda Kubbadda-cagta Iyo Sidda Layaabka Leh Ee Lagu Bixiyay
Waxay ku asteysantahay mid kamid ah xaaladihii ugu layaabka badnaa taariikhda kubbada-cagta, laakiin maxaa dhab ahaantii maalintaasi xasuusta leh kadhacay magalaada Somerset ee Koonfur Galbeed Waddanka Ingiriiska?
Waxay ahayd cayaar u dhaxaysay kooxaha Cross Farm Park Celtic iyo Taunton East Reach Wanderers 31 October sannadkii 2000.
“Waad igu kaftamaysaa?” ayuu yidhi Todd oo yaaban kaddib markii kaarka cas ee kulanka la siiyay. Balse haddii aan dib u eegno dhacdada, Waxay ahayd falcelin gebi ahaanba caddaalad ah.
“Waxaan qarka u saarneeyn inaan billowno cayaarta, sidii caadada ahaydba garsooruhuna wuxuu na xasuusiyay inaan iska ilaalino aflagaadada. ” Todd oo ah cayaaryahankii casaanka la siiyay ayaa u sheegay SPORTbible.
“Garsooraha ayaa isagoo i ag maraya, wuxuu ka dhawaajiyay seerigii billowga cayaarta laakiin wuxuu si dhawaq leh uga ag dhawaajiyay dhegteyda middig.”
“Waan foorarsaday, waxaana idhi ” f*** me ref, taasi way qaylo badnayd! “
Kaliya labo ilbiriqsi gudahood garsoore Kearle wuxuu siiyay weeraryahanka Cross Farm Park Celtic kaarka casaanka, isagoo ku sababeynaya ‘hadal xumadiisa iyo aflagaadada’ inay tahay sababta ka dambeysa in goor hore loo qubeeyo.
22 jirkaan ayaa lagu ganaaxay 27 Ginni waxaana sidoo kale la ganaaxay 35 maalmood oo la xiriirta faalladiisii ” f*** me ref, taasi way qaylo badnayd! “
“Waxaan u sheegay inuu ku dhowaaday inuu dilaaciyo dhegteyda. ” Lee, oo hadda ah 42 jir, ayaa siddaas ku waramay.
“Waxaan weydiiyay, ‘Miyaad kaftamaysaa” oo wuxuu igu yidhi ‘maya, waad baxaysaa. Adigu hadda hadal xun baad ku hadashay” ” cayaarta kahor wuxuu na yiri aflagaado iyo hadal xun oo kasta lama aqbali karo. laakiin waxa aan sameeyay oo dhan waa inaan foorarsaday, anigoo madaxa gacmaha kula jira oo ku qeylinaya. Taasi waa wixii aan sameeyay.”
Markii uu Todd garoonka ka baxayay, saaxiibbadiis ‘waa ay qoslayeen’
“Waxay u maleeyeen inay iyaduna kaftan tahay laakiin isla markiiba way nagu dhacday markii aan ogaanay inaan nahay toban nin. Waxay ahayd inaan saacad iyo badh taagnaado oo aan daawado ciyaarta oo keliya.” Ayuu ku waramay mid kamid ah shaqaalaha kooxda.
Mark Heard, oo isna xilligaas maamule ka ahaa kooxda casaanka la siiyay, ayaa isna wajahay xaalad naxdin leh.
Inkastoo uu goor hore ka baxay weeraryahankooda, toban nin oo kooxda Cross Farm Park Celtic ayaa guul soo hoyay kulankaas kaddib markii ay 11-2 kaga badiyeen kooxdii kasoo horjeedday ee Taunton East Reach Wanderers.
RASMI: Kooxda Sannadka Horyaalka Premier League-ga Oo La Shaaciyay
Real Madrid Iyo Barcelona Oo Isku Heysta Daafac U Cayaara Manchester City